Unxweme/iLahemaa, ibhafu enamanzi ashushu ephandle - I-Airbnb
Unxweme/iLahemaa, ibhafu enamanzi ashushu ephandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguBeachboog
Indawo yePerfekt ukuba ufuna ukuchitha ixesha kwindawo enomtsalane elwandle. Kukho umoya oqaqambileyo kunye nethuba lokuhamba ngesanti entle iAndineeme. Qhuba uqubha kwiKolga Bay ehlaziyayo. Ukunyuka intaba okanye uqhube ngemoto eLaahema Natsonal Park. Ikwidolophana entsha ukusuka e-Tallinn 45 km, ngemoto imizuzu eyi-40.
Indlu yakho wedwa yi-45 m2. Le ndlu ikwindawo ye-3866 m2. Ibiyelwe kwaye inomhlaba oqingqiweyo. Indlu ngo-2019 , inemigangatho engaphantsi. Igumbi lokuhlambela elikhulu kunye ne-sauna encinci. Inazo zonke iindawo zokuhlala zale mihla nezintsha- i-TV, ibhedi evulekileyo, ikhitshi elinefenitshala kunye negadi yayo ye-ceramic.BIG, indawo evulekileyo yokujonga
kunye nokukhanya okuninzi kuyo nayiphi na imozulu.SUNSETS,BBQ.
Ukuze ubhataliswe imali eyongezelelekileyo ukuba kufuneka uhambe ngemoto yabucala - yi-0.5€ ngeekhilomitha
ibhafu enamanzi ashushu 10. ukwenzela abantu ababini (ibhafu enexesha lokufudumeza elipheleleyo leeyure eziyi-3)
5. iintsuku * ukhenketho lokunyuka intaba
Indlu enezinto onokuzisebenzisa zale mihla ikwigumbi elikhulu labucala. Iindwendwe zinokonwabela indalo, ulwandle kunye nesandi samaza ngamaxesha amane onyaka. Nyuka intaba uselunxwemeni lwesanti. Amanzi olwandle acwengileyo kunye neendawo ezincinci ezintle zikumema ukuba uzame amanzi epen nangayiphi na imozulu. Ukukhanya, ubushushu kunye nomoya ococekileyo zenza kubekho imeko yeholide emnandi.
1. Ngemoto ukuya kwiTsitre driveway kwaye ubuyele wedwa, uhamba ngakwicala lolwandle ukuya kwikhaya leholide. Ubude bohambo bumalunga neekhilomitha eziyi-8 ukuya kweziyi-2, emva koko. Xa ufika, ibhafu enamanzi ashushu ikulindile!
2. Uhambo lokuya kwisiqithi saseMalus/ukubukela imozulu efanelekileyo.
Ekhaya leholide uza konwatyiswa zizinto zendalo ezinemibala kunye nemihombiso.
Fowunela u-5642722 ukuba unemibuzo